KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Faallo - 1° Luulyo Gobonimo, Kuwaan Gunimo ayay Soomaali u doorbideen! — ? Daawo Video
1° Luulyo Gobonimo, Kuwaan Gunimo ayay Soomaali u doorbideen! — ? Daawo Video
Keydmedia Online Inkastoo Shacabka Soomaaliyeed ay u dabaal dagayeen fantisiyaha iyo Qiimaha ay leedahay Maalinka 1-da Luuliyo oo ku beegan markii Gobollada Koonfureed ee Dalka ay ka xoroobeen Gumeysigii Talyaaniga ayna mataanoobeen Gobaladii Koonfurta iyo Waqooyga, hadana waxaa jira Nux nux iyo hadal hoose oo Muujinaya niyad jab Shacab.
Marka aan tixraac ku Sameynayo Taariikhda Soomaaliya, waxaa jiray dano iyo ujeedooyin cad iyo kuwa Qarsoon oo uu Gumeysiga Diirka cad ka lahaa Dhulka Soomaaliya, waxuuna arintaasi taaba galkeeda uu u galay dadaal dheer.
Taarikhyanada waxa ay sheegeen in Bilowgii xiriirinta juquraafiyada Aduunka iyo sahankii sahmiyayaasha reer Yurub ay ku yimaadeen dhul ka tirsan Qaarada Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahay in ay qeyb weyn ka ahaayeen furihii Gumeysiga.
Waxaa lagu koobaa Inta badan Seddex qodob oo waaweyn sababta reer Yurub ay ugu soo gurbaan tunteen Qaarada Afrika ayna u go’aansadeen Qabsashadeeda iyo Gumeysigeeda.
A- Baadariyadii reer Yurub ee isu muujiyay kolkay qaarada imaanayeen wadaado Diin faafinaya oo gudbiyay Qarar tafaftiran oo ku saabsan Nolasha, Diinta, Dhaqanka iyo Hidaha dadka Afrika, waxuuna Gumeysiga uu darsay Dal walba qaab nolaleedkiisa, kaasoo uu ku dabaqay qaabka GUMEYSI ee uu doonayo.
B- Sahmiyayaashii iyo Ganacsatadii reer Yurub oo iyaguna dowladahooda ku dhiira galin jiray in ay qabsadaan dhul ka tirsan qaarada Afrika, waxaana arintaasi sababteeda ay tahay dhulka Afrika oo laga helay qeyraad ay macdanta iyo Almuuniyamka ugu horeyso si weyn looga baahnaa Warshadaha reer Yurub.
C- Iyadoo Wargeysyada Reer Yurub ay Madaxda Dalalkooda iyo maalqabeenadooda ku soo jeedin jireen kulana talin jireen madaxdooda in aysan u dayma la’aan kheyraadka dhex ceegaaga Qaarada Afrika oo ah mid baaxad weyn isla markaana Mudan in laga faa’ideesto.
Is biirsiga qodobadaasi ayaa laga dhaxlay duulaankii Yurub ee Qaarada Afrika, waxaana Qarnigii 18-aad loogu Magac daray Qarnigii Qamaamka qaarada Yurub, waayo Dalal badan oo Yurub ah ayaa ku soo qamaamay Qaarada Afrika, waxaana Sababta ugu weyn ee qamaamka keentay ay aheyd hirgalintii Kacaankii Warshadaha waayo waxaa loo baahday agab ceyriin ah oo la adeegsado dhanka wax soo saarka Warshadaha.
Dowladaha Yurub iyaga oo ka fakaray hirgalinta qorshahaasi ayeey 1884-1885 Shir ku yeesheen Magaalada Baarliin ee Dalka Jarmalka, laakiin Natiijadii ka soo baxday Shirkaasi waxay noqotay mid murugo iyo uur ku taalo xanbaarsan waxaana Umadaha Afrika ay noqdeen kuwa madiidin u noqday Gumeysiga waxaana ka dhacay Qaarada Gumeysi kii ugu xumaa ee dunida soo mara.
Ma aysan harsan Maalinta Gumeysiga oo waxaa ku dhaceysay dharbaaxada muwaadiniinta Xornima doonka ah kuwaasoo ay ka go’need mar walba in ay xoriyadooda helaan, taasina waxa ay da-dajisay in Dalal badan oo Afrika ah ay ka dhismeen dhaq dhaqaaqyo awood leh oo xornimo u dirir ah isla markaana difaaca dalkooda ay daacad ka tahay.
AAS-AASKII URURADA XORNIMA DOONKA
Dhanka Soomaaliya gaar ahaan Koonfurta waxaa ka hana qaaday Urur wadaniga ah ee SYL 1943 kaasoo guntiga dhiisha isaga dhigay sidii uu uga shaqeyn lahaa xornimo gaarsiinta Dalka iyo Dadka Soomaaliyeed, waxaana SYL ay ahaayeen Dhalinyaro ka tis qaadata isla markaana kaalma weydiisata muwaadiniintii Soomaaliyeed, waxaana SYL taageeri jiray Hooyooyinka Soomaaliyeed oo Garaamka ilmahooda qeyb ahaan ku taageeri jiray Leegada.
Sanadkii 1945kii Gobolada Waqooyi waxaa ka hanna qaadey Xisbi siyaasi ah, oo ay dadku markii hore mucaaradeen una qaateen inuu ku saleysanyahay hab Qabiil hase yeeshee ka dib ayay dadkii fahmeen isla Sanadkii 1956dii waxaa la badelay magacii Xisbiga iyo ujeedooyinkiisiiba.
Qodobadii ahdaaftii xisbbiga waxaa ka mid ahaa:
Inay gobolada Waqooyi helaan xornimo taam ah oo ayna wax shuruudihi ku xirneyn
In la mideeyo dhammaan gobolada soomaaliyeed ee isticmaarku kala qaybiyey
In kor loo qaado Waxbarashada Diinta Islaamka iyo wax soo saarka dalka si looga maarmo gacan gumeysiga ku yeesho Soomaaliya.
In ay soomaalidu qabyaada iyo nidaamka faasidka ah ee gumeysiga la dagaalanto Xisbigaasi oo la odhan jirey Raabidatu Soomaal.
Sanadkii 1958dii Shacabka Soomaaliyeed ee gobolada Waqooyi wuxuu si dhab ah u fahmey xaalada dalka ee gumeysigu Gacanta ku dhigay waxayna u diyaar garoobeen geeri iyo nolol, waxayna qaateen hubkoodii, Xisbigii Raabidada oo ahaa xisbigii hogaaminayay halgankaasi Somaaliyeed wuxuu dhawaaqey inuusan ogoleyn inuu ku hoos noolaado gumeysigii Ingiriiska Wuxuuna garaacay albaabadii Xoriyada ee Engiriisku Xiray.
Intaa kadib waxaa sameesmay SNL & USB oo labaduba ujeedadoodu ay ahayd in xornimo iyo Madaxbanaani la helo lagana hoos baxo Gumeysiga Ingiriiska oo isagu Gacanta ku hayay Gobolada Waqooyi ee Soomaaliya.
Waxaana dhamaan dhulkii ay Soomaalida ku nooleyd ee Somaaliya ku faafay, dhaqdhaqaaqii gobonimo doonka ee looga soo horjeeday gumeystayaasha reer Yurub.
Dhinaca Gobolada Koonfureed, dagaalkii Labaad ee Dunida markii uu Engiriisku ku tabar roonaaday Sanadkii 1941kii Gacanta ku dhigay Gumeestihii Engiriiska taasoo aheyd Dagaal uu ku jabiyey Talyaaaniga , wuxuuna ingiriisku ku guuleystay inuu ka taliyo dhammaan gobolada Soomaaliya oo dhan.
Sanadkii 1943 bishii May 15dii ayey 13 Dhalinyaro Soomaaaliyeed ah waxay isu abaabuleen sameynta Naadi ay ku mideysanyihiin Dhalinyrada Soomaaliyeed kuwaas oo kala ahaa:
C/qaadir Saqawadiin - Max’ed Xirsi Nuur - Yaasiim Xaaji Cusmaan - Xaaji Max’ed Xuseen - Cusmaan Qariidi - Dheere Xaaji Dheere - Daahir Xaaji Cusmaan - Cali Xasan Max’ud - Max’ed Cali Nuur - Max’ed Faarax Hilowle - Xaaji Max’ed C/laahi - Huudow Macalin C/lle - Max’ed Cusmaan Baarba.
Dhalinyaradaasi iyagoo garabsanaya shacbiga Soomaaliyeed ee dhinaca gobalada Koonfureed waxay hirgaliyeen in ay sameeyaan xisbigii SYL ee aabaha u ahaa halganka Gobalada Koonfureed waxayna xaruntii xisbiga ka dhigteen Magaalada Muqdisho. Iyagoo aas-aaaska Magacii hore xisbiga loo yaqiinay SYC (Somali Youth club).
Dadaalka Ururada Xornima doonka ah waxaa laga dhaxlay in xoriyad ay helaan Ummadda Soomaaliyeed, waxaana 26-june 1960 xornima qaatay gobalada Koonfureed, waxaana Afar maalin kadib 1 July 1960 xornimada la siiyay Koonfurta iyadoona xarunta Visha Governo ee magaalada Muqdisho ay ku midoobeen xornimadiina isku darsadeen labadii gobal ee Waqooyi iyo Koonfur.
Dhalinyaradii xornima u dirirka ahaa kaalinta wacan ka soo qaatay miraha xoriyada in la gaaro ayaa la hilmaamay kolkii gumeysiga leyska eryay, waxaana xukunka faraha uu u galay dad aan in badan dhaq dhaqaaqa iyo howsha xoriyada aan shaqo ku laheyn, taasina waxa ay dhashay uur ku talo iyo dhibaato ay wajaheen xornima u dirirkii laakiin waxay isku sabarsiiyeen in Muhiimadooda ay aheyd Gumeysiga inuu dalka ka baxo isla markaana qabashada xukunka aanu qiima badan u laheyn iyaga.
Xoriyadii kadib waxaa la galay 9 Sano oo xukun rayid ah, waxaa xigay 21 sano oo xukun Milatari balse waxaa ka danbeeyay 22 Sano oo Burbur iyo Dhibaato ah, taasina waxa ay ka dhigeysaa 53 Sano oo 22 Sano oo ka mid ah fashil uu ku dhamaaday isla markaana Dalka dib u dhac mooyee horukac aan loo tirin.
Mudaadii Dalka uu maamulaya Milatariga oo watay Magaca Kacaanka ayaa Waxaa DHACAY waxyaabo fara badan iyadoona amaanta ugu weyn ee kacaanka loo hibeeyo ay tahay ka shaqeyntii Qorshihii hir galinta Qorida Af-Soomaaliga, laakiin eedo kale ayaa tiriyaa kacaanka.
11-Janaayo 1975-kii ayaa kacaanka waxaa ka soo yeeray hadal ay aad uga caroodeen dad badan kaasoo ahaa in ay ragga iyo Dumarka Siman yihiin dhan walba haday ahaan laheyd dhaxal, Shaqo IWM, taasina waxaa ka carooday cuilma soomaaliyeed oo iyagu sheegay in Kacaanka uu ku kacay fal ka dhan ah diinta islaamka iyagoona tilmaamay in aan lagu raali noqon karin ficilkaasi.
Aroornim xili saacadu ay tahay 10:30 ayaa culimadii ka gadooday hadalka kacaanka oo tiradooda aheyd 10 waxaa lagu toogtay fagaaraha ka soo horjeeda dugsiga Booliska ee Gobalka banaadir Waxaana sida ku xusan taariikhda magacyada culimadaasi ay kala ahaayeen:
1- Shiikh Axmed Shiikh Max’ed - 2- Shiikh Muuse Yuusuf - 3- Shiikh Cali Xasan Warsame - 4- Shiikh Xasan Ciise Ileeye - 5-Shiikh Max’ed Siyaad Xirsi - 6-Shiikh Aadan Siyaad Xirsi - 7- Shiikh Cali Jaamac Xirsi - 8-Shiikh Saleebaan Jaamac Axmed - 9- Shikh Axmed Iimaan - 10-Shiikh Yaasiin Cilmi Cawil.
Wixii ka danbeeyay toogashadii Qaadacaada dhinaca Diinta Caanka ka ahaa, Kaacanka wuxuu galay muwjad cakiran oo aan caadi aheyn, waxaana marba marka ka danbeysa uu noqdo mid dhibaatooyin wajahaya iyadoona ugu danbeyntii ay meesha ka saareen Jabhadaha hab qabyo ah oo nidaam Qabiil u abaabulan.
Jabhadihii waxa ay si aan ka fiirsi laheyn u burburiyeen dhamaan wixii Dalka bilic iyo qiima uu lahaa, iyagoona aan ka fakarin Mustaqbalka Dalka iyo dadka Soomaaliyeed, waxaana arinkaasi uu na dhigay halka aynu Maanta joogno oo ah musiibo tii ugu darneed.
Wuxuu Dalku dib uga soo kaban waayay, Niman Gafanayaal ah gaamuuray ah oo Gumeysigu Cagafcagafta Dalka lagu burburiyo ka dhigtay, oo Diintoodu tahay Qabiil iyo Qabyaalad. Rajo iyo iftiin Midnimo markii ay muuqatana habda fud soo yiraahda oo Isbaaro u dhigtay Rajadda Midnimada Soomaaliyeed, hormarka iyo Nabad kuwada Noolaashaha Bulshada.
Inkastoo Soomaaliya ay tahay Qaran, misanah ma dhisna oo ma dhameystirna Dhinac walba.
Waxaa maqan Ciidan Soomaaliyeed oo Dalka Difaaci kara, waxaa maqan Maamul midaysan oo ka howlgala Raascaseyr ilaa Raaskambooni, waxaa maqan Dhaqan Nadiif ah oo Soomaalinimo ku dheehantahay, waxaa maqan Garsoor Cadaalad ah oo Gafanayaalka, Qaswadayaalka, qaran-dumiyaalka - kuwa Calanka cadowga ku ah - lahor keenooo xukun ku ridda, oo waxaa maqan in lasoo Afjaro Argagaxa ay Argagixisadu wali ku hayaan Bulshadda degtaa Gobollada Soomaaliyeed qaarkood.
Hadii intaas la heli lahaa, Maanta 1° Luulyo Keydmedia Online way u Dabaaldagi lahayd.
Keydmedia Online - Editorial Desk